RANT: Ownnye nwere ngalaba gị? | Martech Zone
Tuesday, February 26, 2019 Tuesday, February 26, 2019 Douglas Karr
Ternyaahụ, mụ na ndị isi ụlọ ọrụ mpaghara nọ, anyị na-atụlekwa ụfọdụ mpụga. Fọdụ n'ime usoro ndị achọrọ ga-achọ ụfọdụ ndekọ ngalaba ka emelitere, yabụ ajụrụ m onye nwere ike ịbanye na ụlọ ọrụ DNS. Enwere ụfọdụ oghere, n'ihi ya, m mere ngwa ngwa Nlegharị anya ndị na GoDaddy iji mata ebe e debara aha ngalaba ahụ na ndị edepụtara aha ha.
Mgbe m hụrụ nsonaazụ ya, ọ juru m anya. Backgroundfọdụ ndabere mbụ…
Ndebanye aha ngalaba
Mgbe ị debanyere ngalaba gị, enwere kọntaktị dị iche iche ị nwere ike itinye na akaụntụ gị. Ọ bụrụ n'ị na-ele ndị ụlọ ọrụ m anya, DK New Media, lee ihe ị ga-ahụ:
Aha ngalaba: dknewmedia.com
Ndenye aha njirimara: 1423596722_DOMAIN_COM-VRSN
Debanye aha WHOIS Server: whois.godaddy.com
Debanye aha URL: http://www.godaddy.com
Exbọchị mmebi ndebanye aha ndebanye aha: 2022-03-15T13: 41: 31Z
Debanye aha: GoDaddy.com, LLC
Debanye aha IDI ID: 146
Debanye aha Mmejọ Kpọtụrụ Email: abuse@godaddy.com
Kpọtụrụ Ekwentị Kpọtụrụ ekwentị: +1.4806242505
Ọnọdụ ngalaba: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Ọnọdụ ngalaba: ahịaUpdateProhibited http://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Ngalaba Ọnọdụ: clientRenewProhibited http://www.icann.org/epp#clientRenewProhibited
Ọnọdụ ngalaba: clientDeleteProhibited http://www.icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Aha Registrant ID: Adịghị Site ndekọ
Aha Registrant: Douglas Karr
Isttù Na-edeba aha: DK New Media
Street Street: 7915 S Emerson Okporo ụzọ
Registrant Street: Suite B203
Obodo na-edeba aha: Indianapolis
Registrant State / Province: Indiana
Registrant Postal Code: 46237
Mba na-edeba aha: US
Aha ekwentị: +1.8443563963
Registrant ekwentị Ext:
Aha Faksị: +1.8443563963
Registrant Faksị Ext:
Aha Registrant: info@dknewmedia.com
Aha nchịkwa ID: Adịghị Site na ndekọ
Aha Aha: Douglas Karr
Nhazi njikwa: DK New Media
Streetzọ okporo ụzọ: 7915 S Emerson Ave
Streetzọ okporo ụzọ: Suite B203
Obodo nchịkwa: Indianapolis
Admin State / Province: Indiana
Koodu Postal Admin: 46237
Mba nchịkwa: US
Ekwentị Ekwentị: + 1.8443563963
Nlekọta ekwentị Ext:
Faksị nchịkwa: + 1.8443563963
Admin Faksị Ext:
Adreesị Email: info@dknewmedia.com
Ndebanye aha Tech ID: Adịghị Site ndekọ
Tech aha: Douglas Karr
Ngalaba Tech: DK New Media
Egwuregwu Street: 7915 S Emerson Ave
Tech Street: Suite B203
Obodo Tech: Indianapolis
Tech State / Mpaghara: Indiana
Koodu Ntanetị Tech: 46237
Obodo Tech: US
Tech ekwentị: +1.8443563963
Tech ekwentị Ext:
Faksị Tech: + 1.8443563963
Oi Tech: info@dknewmedia.com
Aha Server: NS33.DOMAINCONTROL.COM
Aha Server: NS34.DOMAINCONTROL.COM
DNSSEC: abughi aha
URL nke ICANN WHOIS Data Nsogbu Akụkọ: http://wdprs.internic.net/
>>> Nwelite ikpeazụ nke nchekwa data WHOIS: 2019-02-26T14: 00: 00Z <<
Ihe ị ga-achọpụta ozugbo bụ na enwere kọntaktị dị iche iche metụtara na ngalaba:
Na-edeba aha - onye nwe ngalaba
Admin - dika, kọntaktị ịgba ụgwọ maka ngalaba ahụ
Tech - kọntaktị teknụzụ na-ejikwa ngalaba (n'èzí ịgba ụgwọ)
Mgbe m lere anya n’ahịa onye ahịa m, kọntaktị niile ahụ laghachitere na adreesị ozi-e na ngalaba ụlọ ọrụ IT ha. Ha niile… bụghị naanị na Admin na tech, ma registrant nakwa.
Nke a anaghị anabata ya.
Ọ bụrụ na?
Ka anyị kpọọ obere egwuregwu nke ọ bụrụ na.
Gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere ịgba ụgwọ ịgba ụgwọ ma ọ bụ iwu arụmụka na ụlọ ọrụ ndị na-depụtara dị ka gị na ngalaba si registrant?
Gịnị ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ndị edepụtara dị ka onye na-edebanye aha gị na-akwụsị ọrụ ma ọ bụ na-egbochi akụ ha?
Gịnị ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ndị edepụtara dị ka onye na-edeba aha gị na-ewepụ adreesị ozi-e ma ọ bụ hapụ ngalaba ha edepụtara dịka onye nwe ụlọ ọrụ gị?
Nke ahụ ziri ezi… nke ọ bụla n’ime nsogbu ndị a nwere ike ime ka ị tufuo ngalaba gị! N'okwu a, onye ahịa m etinyela ọtụtụ nde dollar na azụmaahịa azụmaahịa ha na ikike ikike ha n'ịntanetị n'ime afọ iri abụọ gara aga. Inghapụ nke ahụ ga-emetụta azụmahịa ha n'ụzọ siri ike - na-eweta ihe niile site na email ụlọ ọrụ ha na ntanetị ha.
Nke ahụ bụ ihe ị na - enweghị ike ịhapụ ịhapụ onye ọzọ.
Kedu ihe ị na-eme?
Mee a onye anya na ngalaba gị taa… ugbu a. Ọ bụrụ n'ịchọta na adreesị ozi-e nke onye na-edebanye aha bụ onye na-azụ ahịa, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ IT nke ị goro iji jikwaa DNS gị, mee ka ha gbanwee adreesị ozi-e registrant ahụ ozugbo ma hụ na ị BWNR account akaụntụ ndebanye aha ebe ọ guzobere na.
Ahụla m ka nnukwu ụlọ ọrụ na-efunahụ ngalaba ha n'ihi na ha amatadịghị na ọ bụghị ha nwe ha na mbu, onye ọrụ ọrụ ha nwere. Otu n’ime ndị ahịa m gbara akwụkwọ ma gaa ụlọ ikpe iji nweta ngalaba ha n’aka ha mgbe ịhapụchara onye ọrụ ha ka ọ laa. Onye ọrụ ahụ zụtara ngalaba ndị ahụ wee deba aha ha n’aha ya, n’enweghị onye nwe ụlọ ọrụ ahụ.
Emere m ụlọ ọrụ IT ozugbo ozugbo wee rịọ ka ha nyefee ngalaba ahụ na akaụntụ nke onye nwe ụlọ ọrụ ahụ nwere. Nzaghachi ha abụghị ihe ị ga - atụ anya ya… ha dere onye ahịa m ozugbo ma hinted na m nwere ike chọọ dọkapụ ụlọ ọrụ ahụ site na itinye ngalaba na aha m, ihe m mgbe rịọrọ.
Mgbe m zara ya ozugbo, ha gwara m na ihe mere ha ji mee ya bụ iji jikwaa ngalaba ahụ ka onye ahịa ahụ rịọrọ ya.
A sị na ha debere onye nwe ụlọ ọrụ ahụ ka ọ bụrụ onye na-edeba aha ma gbakwunye adreesị ozi-e nke ha nchịkwa na teknụzụ kọntaktị, m ga-akwado. Otú ọ dị, ha gbanwere n'ezie edebanye aha. Ọ dịghị jụụ. Ọ bụrụ na ha na-akwụ ụgwọ ma na-akpọtụrụ ha, ha gaara enwe ike ijikwa DNS ahụ ma lekọta ịgba ụgwọ na mmegharị ọhụụ. Ha adịghị mkpa ịgbanwe n'ezie registrant.
Akụkụ akụkụ: Anyị chọpụtakwara na ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ihe dịka 300% karịa mmeghari aha ndebanye aha ọzọ, nke ha kwuru na ọ bụ iji kpuchie njikwa ha nke ngalaba. Ha na-akwụ ụgwọ ahụ ego ọnwa isii tupu oge mmeghari ohuru.
Iji mee ka o doo anya, anaghị m ekwu na ụlọ ọrụ IT a nwere atụmatụ ọjọọ. Ekwenyesiri m ike na ịchịkwa ndebanye aha nke onye ahịa m mere ka ndụ ha dịkwuo mfe. N’oge na-adịghị anya, o nwedịrị ike ime ka ị ghara igbu oge. Otú ọ dị, ọ bụ adịghị anakwere ịgbanwe registrant email na akaụntụ ahụ.
Ndụmọdụ m maka Ndebanye aha ngalaba nke ụlọ ọrụ gị
Agwara m onye ahịa m ka ọ nweta GoDaddy Akaụntụ, denye aha ha maka ihe kacha… afọ iri… wee tinye ụlọ ọrụ IT dị ka njikwa ebe ha nwere ike ịnweta ozi DNS ha chọrọ. Ebe ọ bụ na onye ahịa m nwere CFO, akwadoro m ka ha gbakwunye kọntaktị ahụ maka ịgba ụgwọ na anyị gwara ya nke akaụntụ ahụ iji hụ na akwụ ụgwọ ngalaba ahụ maka ogologo oge.
ITlọ ọrụ IT ka ga-akwụ ụgwọ maka njikwa nke DNS, mana ọ dịghị mkpa ka ịkwụghachi ha ugboro 3 ihe ụgwọ ndebanye aha. Ma, ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ enweghị ihe ize ndụ na ngalaba ha anaghị achịkwa ha!
Biko lelee aha ụlọ ọrụ gị wee hụ na ikike ahụ dị n'okpuru akaụntụ na njikwa nke ụlọ ọrụ gị. Nke a bụ ihe ị na-agaghị ahapụrịrị njikwa na ndị ọzọ.
Lelee Whois n'ihi na gị na ngalaba
Ulo oru n'iji Social Media Kuputa Ochicho: PepsiCo
Mpaghara ahia na-eme ka ahia Ecommerce na-adịghị n'ịntanetị